पप्पुले पाएको ११ अर्बका आयोजना र निर्माणाधिन आयोजना अब के होला ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalपप्पुले पाएको ११ अर्बका आयोजना र निर्माणाधिन आयोजना अब के होला ?
Home अर्थ पप्पुले पाएको ११ अर्बका आयोजना र निर्माणाधिन आयोजना अब के होला ?
काठमाडौँ : पुल निर्माणमा एक छत्र राज गरिरहेको पप्पु अख्तियारको कारवाहीमा परेसँगै यसले जिम्मेवारी पाएका पुल, सडक, राष्ट्र बैंकको भवनसहित साढे ११ अर्बको जिम्मेवारी पाएको छ ।
पप्पुले निर्माण सम्पन्न भइसकेका तर काम नसकिएर अलपत्र पारेको पुलको संख्या मात्रै २४ वटा छ । यसले निर्माणाधिन अवस्थामा राखेका पुलको संख्या १० वटा रहेको छ । उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक खण्डमा पाँच वटा ठेक्का यही पप्पुले पाएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटार भवन बनाउन जिम्मा पनि यसैले पाएको छ ।
बालुवाटरको भवन निर्माणमा पप्पु छानिएसँगै आएको विवादले २ अर्ब ६ करोड भवन बनाउने सम्झौता भने अझै भएको छैन । छिटो बनाउनुपर्ने र कम कबोल गर्नेलाई दिनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम अनुसार पप्पुले नै पाएको छ । तर, अब के गर्ने भन्ने विषयमा यो भवनको ठेक्का लगाएको राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण अलमलमा परेको छ ।
पप्पुले २४ वटा अलपत्र पारेका पुलेको काम मात्रै साढे दुई अर्ब रुपैयाँको छ । राष्ट्रिय बैंकको एउटै भवन २ अर्ब रुपैयाँको छ । बाँकी सडक र निर्माणाधिन पुल गरी साढे ६ अर्ब गरेर यसले हालसम्म जिम्मेवारी पाएको काम मात्रै साढे ११ अर्ब रुपैयाँको छ ।
पप्पुको गुणस्तरहीन काम, कमजोर व्यवस्थापन र काम नै नगर्ने र अलपत्र पार्ने गरेको अख्तियारले भष्ट्राचारी ठहर गरेपछि यसले लिएका करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ ४० वटा आयोजना अब के हुने भन्ने अन्योल पनि सिर्जना भएको छ ।
पप्पुले काम हात परेका अधिकांश आयोजना वर्षाैदेखि अलपत्र छोडेकै कारण यसको आलोचन सुरु भएको हो । पप्पुले आफैंले लिएको आयोजना १५ वटा जति मात्रै भएपनि बाँकी आयोजना भने संयुक्त लगानी (जेभी)मा रहेको छ ।
जेभीमा रहेका कम्पनीले काम नगरेको भएपनि पप्पुको बदमासीका कारण जेभी कम्पनीले पनि काम गर्न सकेका छैनन् । जेभीमा आएका कम्पनीले काम नगरको जिम्मेवारी पनि पप्पुमाथि नै परेको छ ।
पुलको निर्माणको बढी ठेक्का पाएको पप्पुले राष्ट्रिय राजमार्गमा सात पुलको काम लिएको छ । यसमध्ये पाँचको निर्माण अवधि सकिए पनि कार्य सम्पन्न भएको छैन । अन्य दुईको पनि निर्माणकै चरणमा छ ।
स्थानीय सडकतर्फ २६ वटा पुलको जिम्मा पप्पुले लिएको छ । यसमध्ये १८ वटाको निर्माण अवधि सकिएको छ । तर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । अन्य आठको निर्माण कार्य समेत सुरु भएको छैन ।
संघीय समाजवादी फोरमका सांसदसमेत रहेका हरिनारायण रौनियारको नाममा पप्पु कन्स्ट्रक्सन छ । फोरमबाट संसद भएपछि उनले कागजी जिम्मेवारी छोराको नाममा दिएका मात्रै छन् ।